ओलीको स्वेच्छाचारिता अन्त्यको लागि चुनाव आवश्यक : कमल थापा « रिपोर्टर्स नेपाल
(Sunday 28th February 2021)
ओलीको स्वेच्छाचारिता अन्त्यको लागि चुनाव आवश्यक : कमल थापा
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, ११ फागुन । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले यसवारे थप व्याख्या दिनुपर्ने भन्दै थापाले राजनीतिक रूपमा शान्ति र स्थिरताको निमित्त चुनाव बश हुने धारणा राखे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असफलता र स्वेच्छारिताको अन्त्यको निमित्त पनि चुनाब आवश्यक भएको औंल्याए । उनले अपवित्र गठवन्धन बनाएर सरकार बनाउन काँग्रेसलाई जनताको म्याण्डेट नभएको र काग्रेसले सत्ताको लोभ देखायो भने कांग्रेस पनि जनताको नजरबाट खस्ने टिप्पणी गरे ।
गृहजिल्ला मकवानपुरमा टोल–टोलमा राप्रपा अभियान संचालन गरिरहेका थापाले आज हेटौंडाद्द१३ को पदमपोखरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई संकटतर्फ लैजाने भएकोले सबै उदार ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। थापाले विगत १४ बर्षको राजनीतिक रोडम्यापले निकास दिन नसक्ने भएकोले त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
स्वाधिन ,सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको सपना पूरा गर्न अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने र निषेधको राजनीति परित्याग गर्नुपर्ने थापाको भनाई छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता विदेशीको एजेन्डा भएकोले त्यो भारी बिसाउनु पर्ने उनको धारणा थियो। File Photo
कम्युनिस्ट र राजाबादीहरुको गठजोड गणतन्त्र मास्ने षडयन्त्र हो : महामन्त्री तिमल्सिना
झापा, १६ फागुन । झापाको कचनकवल गाउँपालिका र भद्रपुर नगरपालिकामा फागुन १३ र १४ १र१
ह्विपको कुरा गर्ने ओली समूहका प्रमुख सचेतक भट्टराईलाई नै कारबाही गर्ने रावलको चेतावनी
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व
दाहाल-नेपालको देउवासँगको भेटबारे ओलीले भनेः प्रभु प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुपर्यो ! भनेर निवेदन हाले
काठमाडौं, १६ फाग्न । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन दौडधुप चलिरहेको भन्दै चुनौती दिएका
केरुङ नाका सोमबारदेखि सञ्चालन हुने
काठमाडौं, १६ फागुन । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनःसञ्चालन हुने भएको छ । चीनमा
व्यङ्ग्यचित्र पत्रकारिताबाट राजनीतिलाई खबरदारी गर्न आग्रह
काठमाडौं, १६ फागुन । कार्टुनिष्ट क्लब अफ नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कार्टुन पत्रकारिता र
हेटौडा, १६ फागुन । हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गरी दैनिक एक करोड
झापा, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापामा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यासलगायत विभिन्न
देश बनाउन ‘बत्तीमुनि उज्यालो’ चिन्तन
काठमाडौँ, १६ फागुन । बत्तीले चारैतिर उज्यालो दिन्छ तर आफूमुनि अँध्यारोको अँध्यारो नै हुन्छ ।
कांग्रेसले देशलाई बन्धक बनाउँदैन् : डा. रिजाल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो
निकास खोज्ने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो, अतिले खति गर्छ : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, १६ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.
नेकपाको कानुनी विभाजन रोक्न अर्को सुत्रः ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमै राखेर एकताको महाधिवेशन
काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कानुनी विभाजन रोक्ने प्रयासहरु अझै चलिरहेको छ ।